U-Apple uthenga into ebangela umdla "I-Snow Blind" eneenkwenkwezi uJake Gyllenhaal | Ndisuka mac
U-Apple uthenga amalungelo okudlala "I-Snow Blind" eneenkwenkwezi uJake Gyllenhaal
UToni Cortes | | Apple TV
UApple uthenge enye imovie. Ngeli xesha khange kudlule ukuba kubize malini, kodwa ukubona ukuba ngubani osebenza kuyo, akuzange kubize ixabiso, ngokuqinisekileyo. inkampani iyaqhubeka nokwandisa ikhathalogu yayo engaphelelanga kuthotho, amaxwebhu kunye neefilimu kwiqonga levidiyo Apple TV +.
Uninzi lwabasebenzisi beApple babukele iApple TV + enkosi ngokunyusa inkampani unyaka omnye mahala kwiqonga lokuthengwa kwe-iPhone entsha, i-iPad okanye iMac. Uninzi lwethu luseneenyanga ezintandathu zokunyuselwa. Ukuba bayaqhubeka kweli nqanaba leeprojekthi ezintsha, ngaphezulu kwesinye siyakuphela sihlawula xa ixesha lokupasa liphela….
I-Apple ihlala izinikele ekwandiseni umxholo wayo we-Apple TV +, nokuba zithini iindleko. Ugcine nje amalungelo okuziqhelanisa nenoveli «Isithonga seqhwa»Kudlala uJake Gyllenhaal, emva kwedabi lokubhida ngamalungelo amaqela amathandathu.
I-Thriller isekwe kwinoveli yemifanekiso ngu Ollie Masters kunye noTyler Jenkins. "I-Snow Blind" ibalisa ibali lenkwenkwana yaseAlaska efumanisa ukuba usapho lwayo lukhona kwiNkqubo yoKhuselo lwamaNgqina, ifihlakele emntwini ofuna ukuziphindezela kwaye akhuselwe ziiarhente zeFBI.
Ifilimu iveliswa liqabane laseGyllenhaal kunye neeNcwadi eziThoba uRiva Marker kunye noRoss Richie noStephen Christy, Iingxelo zokugqibela. IGyllenhaal yinkwenkwezi, kunye neskripthi esibhalwe nguPatrick Ness kunye nefilimu ekhokelwa nguGustav Moller. UAdam Yoelin kunye noNowa Stahl ngabavelisi abalawulayo, kunye noMette Norkjaer okhonza njengomvelisi kunye.
Akucaci ukuba iApple ihlawule malini ngamalungelo efilimu, kodwa xa ucinga ukuba ibinzima ukulwa abahambisi abahlanu ngaphezulu, ngexabiso eliphantsi akuyi kuza kuApple, kunjalo.
Esi sivumelwano, esaziwa ngokugqibela yiApple Studios, silandela iveki emva kokuba amalungelo efilimu kaWill Smith ekhuselekile.Emancipation«Ekukholelwa ukuba ngowona mnyhadala mkhulu wokuthengwa kwefilimu kwimbali yeshishini elijikeleze 100 izigidi zeedola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » U-Apple uthenga amalungelo okudlala "I-Snow Blind" eneenkwenkwezi uJake Gyllenhaal
I-beta ye-beta kawonke-wonke, i-ARM kunye ne-XNUMXrd party GPU kunye nokunye okuninzi. Eyona veki igqwesileyo kwiSoydeMac
Iiglasi ze-Apple zingenisa umgca wemveliso yeFoxconn